Ndeipi iyo ROI yeMutengi Akavimbika? | Martech Zone
Isu takabvisa chibvumirano chitsva na bhizinesi mutengi kubudirira nyanzvi, Bolstra.
Bolstra isoftware solution (SaaS) inopa Bhizinesi kumabhizinesi eBhizinesi ari kutsvaga kuwedzera mari yavo inodzokororwa nekudzora churn uye kuzivisa mikana yekuwedzera. Mhinduro yavo, ine yakavakirwa-mukati maitiro akanaka, inobatsira kambani yako kutyaira izvo zvaunoda zvinoda izvo vatengi vako vanoda.
Mumakore mashoma apfuura, sezvo rwendo rwedu rwekushambadzira rwakachinja uye isu tichiongorora kukura kwebhizimusi 'kushambadzira - chakakosha kuita chiratidzo chinoramba chakamira vatengi vanoziva. Mapuratifomu akaita seBolstra ari kuisa kuyerwa uye kuyerwa kwenzira dzevatengi nzendo kumusoro kwepfungwa mukati memasangano - uye vatengi vavo vari kuona mhedzisiro inoshamisa kare. MuB2B SaaS, kuchengetedzwa kwevatengi kwakakosha. Tiri kuona akawanda uye akawanda makambani achirasikirwa nemikana yekukura nekutarisa chete pakutsvaga uye kwete pane ruzivo, kuvimbika, uye kuchengetwa.
Mari yekuwana iri kuramba ichikwira mumaindasitiri mazhinji sezvo vaparidzi vemajitari vanovhara pasi mukana wevateereri vauri kuyedza kusvika, saka kudzoka kwekudyara kwekuchengetedza uye kuvimbika kwevatengi kuri kukura. Haisi iyo makambani anoda kubiridzira vatengi, asi kazhinji nguva inotevera chibvumirano chikuru chinotora chigaro chekumashure kune vatengi varipo vauinazvo. Sezvo kukwikwidza uye sarudzo zvinokwira, uye hunyanzvi hunowedzera kudhura zvemukati, makambani anofanirwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa pakubudirira kwevatengi.
Sanganisa izvi neruzhinji rwekuongorora mapuratifomu online uye huwandu hwezvemagariro midhiya, uye vatengesi vanofanirwa kuteerera zvakare. Iwe unogona kushandisa mamirioni pane inoshanda kushambadzira pamhepo chete kuti uirasikirwe neiyo imwe gaff iyo inoenda hutachiona. Wese munhu ari mukambani yako ava mumiriri weveruzhinji wekambani yako uye anofanirwa kushanda pamwe chete nekutengesa kwako uye kushambadzira kuvaka yako kuvimbika kwechiratidzo, mukurumbira, uye chiremera pamhepo.
Makambani anorerutsa zvakanyanya kukanganiswa kwekuchengetedza pane purofiti izere. Muchokwadi, Kuwedzera kwe5% mukuchengetwa kwevatengi kunogona kuwedzera purofiti pakati pe25% uye kusvika 125%
Iko kubudirira kwevatengi uye kuvimbika kiyi kusangano rako? Iwe unoziva here kuti chako chengetedzo yevatengi chii uye kana chiri kuvandudza? Iwe unoziva here iyo mhedzisiro yekuchengetwa kwako kwevatengi kuri kuita pane yako yepazasi mutsetse?
Tags: arrbhotiKuverengarwendo rwevatengikuvimbika kwemutengimutengi purofitimutengi kubudirirainfographicpurofitiukoshi